Xukuumadda oo heshiis Is-afgarad ah la saxiixatay hay’adda Xuquuqul Insaanka ee QM.
Xukuumadda oo heshiis Is-afgarad ah la saxiixatay hay’adda Xuquuqul Insaanka ee QM. Muqdisho, May 11,2012---Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta kulan la qaatay Saraakiil ka tirsan Qaramada Midoobey, Iyadoona kulanka looga hadlayay heshiis is-afgarad (MOU) oo ay kala saxiixdeen dowladda Soomaaliya iyo hay’adda u qaabilsan Qaramada Midoobey Xuquuqul Insaanka.
Ugu horeyn Amb. Yuusuf Maxamed Ismaaciil (Bari-Bari) ayaa sheegay in kulanka maanta uu yahay heshiis is-afgarad ah kuna saabsan xuquuqda insaanka iyadoo ay kala saxiixanayaan Dowlad Somalia iyo Qaramada Midoobay.
Heshiiskaan ayaa waxaa uu ka koobanyahay qodobada hoos kuqoran:
In la adkeeyo Sharciga iyo kala dambeynta iyadoo loo marayo maamul cadaalad kusalaysan ah.
In la dhiso awooda hay’adaha ilaalinayo Xuquuqul Insaanka.
In la sameeyo wacyi gelin xuquuqul insaanka iyadoo loo marayo Saxaafadda
In la hormariyo Xuquuqda bulshada iyo dhaqaalaha
In lala sameeyo wada shaqeyn joogta ah iyadoo laraacayo habka udagan golaha Xuquuqul Insaanka.
Waxaa heshiiskaan dhanka dowladda u saxiixay Wasiirka Dastuurka iyo Arimaha faderaalaka Soomaaliya, C/raxmaan Xoosh Jibriil waxaana uu sheegay Wasiirku in heshiiskaan uu yahay mid taariikhi ah isla markaana tastuurka cusub ee Soomaaliya yeelanayso uu si weyn u qeexayo dhowrista Xuquuqul Insaanka iyo Xuquuqda muwaadinka Soomaaliga ah uu leeyahay haddana ay laga ma maarmaan tahay in si wada jir ah la isaga kaashado dhowrista Xuquuqul Insaanka.
Ugu danbayntii Ra’iisul Wasaare Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyada ay leedahay in muwaadinka Soomaaliga ah in ladhowro Xuquuqdiisa, dowladuna ay ka shaqeyneyso in muwaadin walba oo Soomaali ah uu helo xaquuqdiisa islamarkaana si guud loo dhowro Xuquuqul Insaanka.